Soomaaliya iyo Pakistan oo kala saxiixday heshiis quseeya Amniga iyo dhaqaalaha – Kismaayo24 News Agency
Soomaaliya iyo Pakistan oo kala saxiixday heshiis quseeya Amniga iyo dhaqaalaha
by Ahmed sudani 30th March 2018 03
Dowladaha Soomaaliya iyo Pakistan ayaa shalay oo Khamiis ahayd ka wada hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa xiriirka Labada dhinac iyo xoojinta iskaashiga amniga iyo dhaqaalaha.
Kulan Caasimadda Pakistan ee Islamabad ku dhexmaray la taliyaha Madaxweynaha Soomaaliya ee arrimaha Siyaasadda dibedda, Balal Maxamed Cusmaan, iyo la taliyaha dhinaca ammaanka Dalka Pakistaan Gen. Nasser Khan Janjua, ayaa lagu gorfeeyay sidii loo adkayn lahaa xiriirka qotada dheer ee Labada Waddan.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay ballaarinta iskaashiga Labada Waddan, gaar ahaan Ganacsiga, horumarinta kheyraadka Aadanaha, Difaaca iyo sugidda ammaanka Dalka Soomaaliya, iyagoo si isku mid ah u ballan qaaday inay si wadajir ah ugu shaqeyn doonaan qodobbada lagu heshiiyay.
Danjiraha Soomaaliya u joogta Dalka Pakistan, Amb. Khadija Mohammad Al-Makhdoomi, oo kulanka qayb ka ahayd ayaa soo dhoweysay iskaaashiga iyo heshiiskan Taariikhiga ah ee dhex maray Labada dhinac, waxayna sheegtay inay Pakistan leedahay awood weyn oo wax looga qabto arrimaha amniga gudaha, iyadoo ay Soomaaliyana dooneyso inay wax ka barato Khibraddeeda.
SAWIRRO:- Bulshada Rayidka ee K/Galbeed oo Kulan ka yeeshay Hannaanka Dib u eegista Dastuurka
Dhagayso:- Degmadda Doolow shirkii kasocday ee Nabadeynta ahaa Xagge Marayaa ?
admin 9th June 2014 28th August 2015
Daawo Saraakiisha Amisom oo boqday Ceel Cade ka hor inta aysan ciidamada kenya ka bixin
admin 26th January 2016 27th January 2016
Mohamed Abdirashid Abaajo 30th January 2019